UBonang ‘uthenjiswe’ umshado yinjinga yaseZim | Isolezwe
UBonang ‘uthenjiswe’ umshado yinjinga yaseZim
Ezokungcebeleka / 9 September 2018, 4:11pm / deli mncwabe
INDANDATHO ebonakala ikhazimula emnweni kaBonang Matheba isiqubule izinsolo zokuthi usethenjiswe umshado yimpunyela yaseZimbabwe
ZIYA ngokuqina izinsolo zokuthi usaziwayo walapha eNingizimu Afrika uBonang Matheba usethenjiswe umshado yimpunyela yaseZimbabwe.
La mahlebezi aqine kakhulu kuleli sonto kulandela ukubonakala kwakhe efake isithombe kuTwitter wakhe lapho efake khona indandatho emnweni wesibili esandleni sangakwesobunxele.
I-blog izeeba.co.za idalule ukuthi ngoLwesihlanu olwedlule uBonang ubonakale eqabulana engaqedi noGenius Kadungure ngo-9 ebusuku egaraji eliseWaterfall eMidrand, eGoli.
Omunye umthombo uveze ukuthi uQueen B useke abonakale eshayela iRolls Royce entsha nokukholakala ukuthi ingenye yezimoto zale mpunyela emgwaqeni yaseGoli.
Imenenja kaBonang, uDavin Phillips ithe ngeke iphawule ngezindaba zangasese zikaBonang.
“Ukube ubudinga usizo ngezithinta umsebenzi wakhe, bengizokwazi ukukusiza, ngiyaxolisa,” usho kanje
Imizamo yokuthola uGenius ayiphumelelanga.
UGenius (34) kuvela ukuthi unenkampani ehweba ngowoyela iPioneer Gases futhi unendawo yokujuxuza iClub Sankayi engaconsi phansi kosaziwayo balapha e-Afrika nabaphesheya. Waziwa ngokudla ukotini nokuba nenqwaba yezimoto amaRolls Royce namaRange Rover.
Kwenzeka lokhu nje uBonang usanda kutshela izinkumbi zabalandeli bakhe ukuthi unesoka elisha kodwa angalivezanga igama lalo.
Le nkulumo wayibhala emasontweni ambalwa adlule kulandela ukuthi ebuzwe ngomunye wabalandeli bakhe ukuthi kungenzeka yini ukuthi uzokhipha ingoma ethi “1000 kisses’ njengoba ejwayele ukubhala kuTwitter maqede anameke inhliziyo ebomvu.
UBonang wehlukane no-AKA ekupheleni konyaka odlule ngemuva kokuthandana naye iminyaka emibili. Ngakolunye uhlangothi uGinuis uveze ezinkundleni zokuxhumana ngasekuqaleni kukaMeyi ukuthi akanamuntu wesifazane empilweni yakhe kulandela ukuhlukana nengoduso yakhe yeminyaka eyisishiyagalombili uZodwa Mkandla.